Hadal-heynta kiiska ONLF oo lagu daminayo qaraxyo waaweyn | KEYDMEDIA ENGLISH
Kooxda Farmaajo, ayaa caan ku ah in ay dhacdo kasta oo hadal-heyn abuurta ku damiyaan dhacdo kale oo ka weyn, waxaana hore xilliyo kala duwan sidaan oo kale, u soo baxay digniin amni, xilli Farmaajo wajahayay kacdoon bulsho.
MUQDISHO, Soomaaliya – [DIGNIIN AMNI] Kooxda waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo iyo Fahad Yaasiin hoggaamiyaan ayaa doonaya in qaraxyo waaweyn lagu weeraro goobo muhiim ah oo ku yaalla caasimadda todobaadkaan, si dhan kale loogu dhigo hadal-heynta baraha bulshada iyo guud ahaa umadda Soomaaliyeed ee ku aaddan kiiska ONLF iyo Qalbi-dhagax.
Sida ay Keydmedia Online, u sheegeen saraakiil amni, waxaa labadii maalin ee la soo dhaafay sare u kacay digniin dhinacyo badan ka imaaneysa, oo sheegeysa in ugu yaraan shan gaari oo qaraxyo sida soo galeen Muqdisho, wax yar kadib markii ay Golaha Wasiirrada soo saareen go’aankii looga laabtay qaraarkii ka dhanka ahaa Ururka ONLF.
Shaqaalaha Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, ayaa sidoo kale la faray in ay feejignaadaan, isla-marakaana socodkooda koontaroolaan todobaadkaan, kana dheeraadaan goobaha dadka xasaanadda leh isugu yimaadaan ee Caasimadda ku yaal, sida; Huteellada, Xeebta Liido, jidka Makka Al Mukarama iyo eeriyada garoonka diyaaradaha.
Agaasime ku xigeynkii hore ee hay’adda Nabad-sugidda iyo sirdoonka Qaranka, Jeneraal Cabdalla Cabdalla Maxamed, aya dhankiisa xusay in Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, qorsheynayaan in qaraxyo xooggan lagu gilgilo caasimadda si bulshada looga weeciyo hadal-heynta baarka sare gaartay ee kiiska ONLF.
“Feejignaan dheeri ah Shacabka Muqdisho, Farmaajo iyo Fahad iyo Al-Shabab waxay qorshaynayaan qaraxyo si loo weeciyo hadalhaynta ka dhalatay go’aan Golaha Wasiirada ee la xiiray arinta Qalbidhagax”. Ayuu yiri Gen. Cabdalla.
Kooxda waqtigu ka dhamaaday, ayaa caan ku ah in ay dhacdo kasta oo hadal-heyn abuurta ku damiyaan dhacdo kale oo ka weyn, waxaana hore xilliyo kala duwan sidaan oo kale, u soo baxay digniin amni, xilli Farmaajo wajahayay kacdoon bulsho.
Mar kasta oo xaalku ku xumaado, waxa ay adeegsadaan Al-Shabaab, si waaqica bulshada loo qaldo, dareenkana loo weeciyo, tusaale; gafkii iyo gardaradii lagula kacay Qalbi-dhagax, 27-kii bishii Agoosto 2017, 48 cisho kadib waxaa caasimadda ka dhacay qarixii [Soobe] ee 14-kii bishii Oktoober.
Saameynta Qaraxaas, si looga gudbo, waxa ay maalmo kadib weerareen hoyga Xisbiga Wadajir, halkaasoo ay ku xasuuqeen ilaalada hoggaamiyaha Xisbiga oo aan waxba galabsan, kadibna, waxa ay duullaan ku qaadeen Golaha shacabka si ay u burburiyaan.
Hadal-heyntii ka dhalatay, askarta Soomaaliyeed ee ka qeyb qaatay dagaalka waqooyiga Itoobiya, kooxdaan, waxa ay ku damiyen khaarijintii Guddoomiyihii degmada Hodan iyo qarax waaweyn oo mid ka mid ah lagu dilay AUN Gen. Galaal.